လ NMP ၏ DOWNLOAD Crater FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 2.32 GB ကို
downloads ရယူရန္ 24 240
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် 01 / 18 / 2016: ဒီရှုခင်းယခု 18,125 စတုရန်းကီလိုမီတာအစား 3625 စတုရန်းကီလိုမီတာဖုံးလွှမ်း, သငျသညျ ပို. ပင်သင့်ရဲ့ VFR ပျံသန်းတန်ဖိုးထားနိုင်ပါ။
ဗားရှင်း update ကို auto-install 10
ရှုခင်းလုံးဝဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်လ (USA) ၏ Crater ထံမှများအတွက် FSX နှင့် P3D v2 + ။
ဒါဟာ 3625 စတုရန်းကီလိုမီတာတစ်ဦးစုစုပေါင်းဖုံးလွှမ်း။ 1 မီတာ / Pix ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပင်မြေပြင်အနီးသင်သည်ရိတ်ဓားလိုထက်ပုံရိပ်တွေတတ်၏။ အကောင်းဆုံးအနိမ့်နှင့်နှေးကွေးသောစစ်ဆင်ရေးအတွက်ခံစား! ဒါ့အပြင်တစ်ဦး 10 မီတာမြင့်မားသော resolution ကိုမြင့်ကွက်များပါရှိသည်။
သငျသညျ Hailey ၏မြို့များ၏လေဆိပ်ကနေပျံတက်နိုင်ရှိရရ (KSUN) 60 မိုင်အမျိုးသားအရံမှတည်ရှိပြီး, ရှုခင်းသင့်ရဲ့ဘယ်ဖက်အပေါ်သင်နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်။
လအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုင်အမှတ်၏ Crater နှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဗဟိုအိုင်ဒါဟို၏မြွေမြစ်လွင်ပြင်ရှိတစ်ဦးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုင်အမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပန်းခြံ cinder တစ်မျိုးကတော့နှင့် sagebrush ၏အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားလျက်ကျွန်းများနှင့်အတူချော်ရည်စီးဆင်းမှုတစ်ကျယ်ပြန့်ရှုခင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ 15,000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ခြင်း, ထိုရှုခင်းချော်ရည်စီးဆင်းမှုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ပန်းခြံရဲ့ရှုခင်းကအမည်ရှိကြောင့်သို့ရာတွင်မီးတောင်များ၏အခြေခံလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်ချြောရှုခင်းစူးစမ်းသောသူ Apollo 1969 အာကာသယာဉ်မှူးအလန် Shepard, Edgar Mitchell က, ဂျိုး Engle နဲ့ Eugene Cernan အားဖြင့် 14 အတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်ပြီးနောက်ကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ်မှလွန်စွာကွဲပြားခြားနားသည်စဉ်တွင် လကိုမှအနာဂတ်ခရီးစဉ်များအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ဘူမိဗေဒ။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
အရေးကြီးညွှန်ကြားချက်နှင့် download သတင်းအချက်အလက်
ဤသည်ကို download အလွန်လေးလံသောဖြစ်ပါသည် 2.32 GB ကို သင်တစ်ဦးမဟုတ်လျှင် ဂျမ်ဘို အဖွဲ့ဝင် .. ဒီရှုခင်း၏ download, ပြီးနောက်,3အရပ်သို့ခှဲဝေခဲ့သည်ကို download အချိန်အများအပြားနာရီစောင့်ဆိုင်းရန်မျှော်လင့်ထား ဖိုင်တွဲတစ်ခုသို့အရာအားလုံးကိုဇီပ်နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ craters_of_the_moon_nmp.zip craters_of_the_moon_nmp.exe အလိုအလျောက် installation ကိုစတင်ရန်။
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်း 100% Rikoooo အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်ထို configuration သငျသညျအဘို့သင့် Simulator ကိုအတွက်ရှုခင်း၏မှတ်ပုံတင်နှင့် activation ကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။ uninstall လုပ်သောအခါ, installer ကိုဇာစ်မြစ်၏သင့်ရဲ့ configuration ကိုပြန်ပေးမည်။